सर्किट ब्रेक पछि बढ्यो नेप्से, १४०४ विन्दुमा टेवा पायो-Setoghar
सर्किट ब्रेक पछि बढ्यो नेप्से, १४०४ विन्दुमा टेवा पायो
काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचकमा करेक्सन देखा परेको छ । पहिलो २ घण्टाको कारोबार सम्म वियरिश प्रवृतिमा रहेको शेयर बजार १ हजार ४ सय ४ विन्दुमा टेवा पाएर बढ्न थालेको हो ।
बजार खुलेको ३५ मिनेटमा ३ प्रतिशतले घटेर पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको नेप्से त्यसपछिको १ घण्टा नवित्दै दोस्रो सर्किट ब्रेक पनि लाग्यो । निरन्तर घटेको बजारमा लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किएपछि बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । शेयर बजारमा मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउने हल्लाले मध्यान्तर देखि बजार उचालेको हो । सोमवार नेप्से २ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् ४० दशमलव ६८ अङ्कले बढेर १ हजार ५ सय १० दशमलव १६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
सोमवार उत्पादन तथा प्रशोधन समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेृको छ । बैङ्किङ समूह र होटल समूहको परिसूचक उच्चदरले बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक बढ्नमा टेवा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम बढेर रू. १ अर्ब ९ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १६ खर्ब ८० अर्ब पुगेको हो । होटल समूहको परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले बढेको छ । ओरियण्टल होटल र तारागाँउँ रिजेन्सी होटल स्थिर रहेपनि सोल्टी होटलको शेयर मूल्य रू.१९ ले बढेपछि यस समूहको परिसूचक ७५ दशमलव ७४ अङ्कले बढेको हो ।
त्यस्तै, बैङ्किङ समूहको परिसूचक ३ दशमलव ६६ प्रतिशत र जलविद्युतको २ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव ९५ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १ दशमलव ८५ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ दशमलव ६२ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको हो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक भने शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन एभरेष्ट बैङ्कको रू. १५ करोड ९१ लाख बराबरको रकम कारोबार भएको छ । बैङ्कको शेयर मूल्य रू. ६० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३ हजार २ सय १५ पुगेको छ । यस कम्पनीको ३ सय ९२ पटकको व्यापारमा ५२ हजार ६ सय ७८ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । साथै, बैङ्क अफ काठमाडौं लुम्बिनीको रू. ६ करोड ६२ लाख र शिखर इन्स्योरेन्सको रू. ५ करोड ६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । जेविल्स् फाइनान्सको शेयर मूल्य ६ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २ सय २७ पुगेको छ ।
सोमवार नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) अहिले ओभर शोल्ड जोन अथवा १७ दशमलव ३१ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको बिक्री चाप बढेको देखाउँछ । नेप्सेमा १ सय २४ कम्पनीको ६ हजार ६ सय ७७ पटकको व्यापारबाट १३ लाख ८८ हजार ५ सय ६१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनी मध्ये ८३ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ, ३० कम्पनीको शेयरमूल्य घट््यो र ११ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर र≈यो । सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो २ दशमलव ७६ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
एभरेष्ट बैंकमा नयाँ भर्सनको इन्टरनेट बैंकिङ सेवा सुरुवात